Fihatrehana ny loza voajanahary :: Hitandro ny mangarahara ny mpitantana ny Bngrc vaovao • AoRaha
Fihatrehana ny loza voajanahary Hitandro ny mangarahara ny mpitantana ny Bngrc vaovao
Hanao laharam-pahamehana ny fangaraharana eo amin’ny lafiny fitantanana sy ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka ny sekretera mpanatanteraky ny Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary (Bngrc) vaovao eto amintsika. Amin’ny lafiny rehetra mihitsy no hasiana izay mangarahara izay, raha ny nambarany.
“Efa nisy foana ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka saingy misy fotoana izy ireo misalasala ary mangataka ny mangarahara amin’ny fitantanana ny fanampiana izay homen’izy ireo ”, hoy ny kolonely Andriakaja Olivier Elack , sekretera mpanatanteraka vaovaon’ny Bngrc nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy Venty Thierry, izay nisahana izany toerana izany teo aloha, teny Antanimora, omaly.
Ankoatra izay, milaza fa hanamafy ihany koa ny fisorohana ny loza mialoha, ity farany. Nambarany fa ny sehatry ny vonjy taitra no tena hahalalan’ny olona Bngrc ka hifantoka bebe kokoa amin’izay ny asa ataony. “Raha nisy ny fisorohana mialoha dia tsy ho toy ireny ny zava-mitranga teny Ampamarinana, ohatra. Na izany aza tsy azo sakanana velively ny fisian’ny loza voajanahary”, hoy hatrany ny kolonely Andrianjaka Olivier. Marihina fa efa nitazona ny toeran’ny talen’ny “opérations et des secours” teo anivon’ny Bngrc ny kolonely Andriakaja ny taona 2009 hatramin’ny taona 2014 ka mahalala ity sehatra ity , araka ny nambarany. Efa nianatra nandritra ny fitantanana ny loza voajanahary teny amin’ny Oniversiten’ Antananarivo ihany koa izy ankoatra ny maha miaramila azy, taorian’ny taona 2014.
Andron’ny fahasalamana :: Nifanotofana ny fitiliana diabeta sy VIH/Sida teny Antsonjombe